Amniga Internetka Bisha Taxanaha Part Four |
Amniga Internetka Bisha Taxanaha Part Four
Tani waa qayb ka mid our final of taxane for internetka Bisha Security our, maanta waxaan doonayaa in aan waxoogaa ka badan oo ku saabsan ammaanka macluumaadkaaga wada hadlaan ee "Cloud".
Cloud ee xirfadlayaasha badan warshadaha waa wax ka badan-keenidda xogta iyo macluumaadka qof kale si ay u maareeyaan iyo daryeelka. In la soo dhaafay, ganacsiga oo dhan ma, gaar ahaan ganacsiga yaryar awoodin inay qortaan, kireeyo iyo shaqeeyaan kooxda IT ah si ay u taageeraan ganacsiga, sidoo hadda aad awoodid. In la soo dhaafay, ganacsiga oo dhan ma, gaar ahaan ganacsiga yaryar awoodi kari waayay inay qortaan, kireeyo iyo shaqeeyaan kooxda IT ah si ay u taageeraan ganacsiga, hadda aad awoodid.
Qaar ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah in la weydiinaya markii la tixgelinayo la isticmaalayo "Cloud" waa:
Maxay dhibaatada ganacsi ahay waxaan isku dayayaa si ay u xalliyaan iyo adeegyada sameeyo run ahaantii waxaan u baahan tahay?
Yaa waxaa laga sugayaa inay masuul ka yihiin adeegyada Cloud ee aan ururka iyo waxa ay noqon waa in ay la samaynayaan?
Waxaa tababar kasta gaar ah loogu baahan yahay Cloud ah?
Waa maxay nooca xogta ama macluumaadka waa in aan halkaas lagu soo tuurayaan?
Sidee macluumaadka ku jira Cloud ka socday aad loo dhawro?
Maxaa dhacaya haddii wax qaldamaan marka laga eego dhinaca ammaanka ah oo aan u baahan tahay inaad la xiriirto qof ka socda bixiyaha daruurtii?
Miyuu jiraa qof kale oo ay leeyihiin xuquuq aan xogta ama macluumaadka mar daruurta?
Wixii milkiilaha ganacsi oo yar yar, Waxay u ekaan kartaa xoogga leh ee tirada doorashooyin iyo fursadaha aan ku xuso halista Kombuyuutarada daruur. Waxaa lagu talinayaa in ay raadsadaan Hanuun takhasus technology ah ee ku yaala goobahan aan ka ahayn iibka Rep ama iibka injineer ah oo la iibiyo adeegyada si loo hubiyo in danaha ugu wanaagsan ee aad la hagaajiyaa.
Ugu dambeyntii, in arrinta toddobaadkan ee, waxaan hababka iyo qalabka qaar ka mid ah taaban doonaa si ay u fududahay in la maamulo ammaanka ganacsiga yaryar aad. Xusuusnow internet waxaa ka buuxa waxyaabo "free" iyo weerarka isticmaalaan ereyga in sida hab si aad u hesho waxaad si loo soo dajiyo wax xun rogtid oo aad qalabka kombiyuutarka ganacsi. Waxaa lagu talinayaa in la siiyo ganacsiyada yar yar si aad u iibsato loo yaqaan oo la xaqiijiyay qalabka ammaanka iyo ganacsiga ilaaliyaan qalabka si ay u ilaaliyaan macluumaadka ganacsi.
Qaar ka mid ah hababka ugu sareysa si ay u sii ganacsiga yaryar aad ordaya si ammaan ah ku saabsan internetka iyo ilaalinta macluumaadka ganacsiga yihiin:
Dhayida kombiyuutarada aad iyo in la xaqiijiyo waxa loo dhigay ilaa for updates automatic loo maleeyo in aad leedahay PC a.
laptops Jir ammaan meel kastoo aad tagtidba. Haddii tago gaari u sii hortiisa iyo in la hubiyo in aad xirtid gaadiidkaaga. Haddii aad ganacsi leedahay xogta xasaasiga ah ee laptops ka fiirsan imayl si loo sugo xogta waa in ay la soo xaday ama lumay.
Ma software antivirus rakibay oo socda la updates ugu dambeeyey on qalabka kombiyuutarka aad.
Isticmaal passwords adag oo kala duwan ee codsiyada kala duwan oo sii passwords meel amaan ah hadii waa in aad iyaga u soo qor. Hoos ka fiiri xal u madax password a.
Iska ilaali Buuro Wadal, e-mails aka phishing in ku jira xiriir la tuhunsan yahay sida looga hadlay todobaadkii laba ka mid ah taxanaha.
Uga xog iyo hubiso in ay tahay meel amaan ah.
Marka la isticmaalayo WiFi ka baxsan xafiiska sida qaxwaha, in ay ogaadaan in waxaasu noqon channel aamin ah iyo xogta qaar ka mid ah dhexda uga dhici karaan. Ka faa'ideyso websites ammaan ah sida kuwa la isticmaalayo https , VPN ama sugtid ilaa inta aad dib ugu heli xafiiska u soo dirto dokumentiga xasaasi ah macmiilka ama isticmaalka sirta ah.
Password ilaaliyo phone
Iibsato iyo isticmaali shredder ah qalabka warqad ay ku jiraan info xasaasi ah.
Ugu dambeyntii marnaba isticmaali computer "free" ee u ololeeya hotel ee ganacsi, oo ay ku jiraan hubinta aad e-mail, duulimaadyo airline, etc.
Waxa intaa dheer in hababka kor ku xusan, waxaad ka heli doontaa liiska kooban ee qalabka. laakiin xusuusnow, had iyo jeer ka fiirsan khatarta ka hor inta aad ka soo dejisan iyo rakibi software kasta oo rogtid oo aad qalabka kombiyuutarka ganacsi. sidoo kale si xoog leh u Waxaan u soo jeedin lahaa inay helaan taageero farsamo xirfadeed waa in aad u baahan tahay; u badan tahay waxaa jira ganacsi yar ee meesha aad degan tahay in takhasusay taageero computer ama technology. milkiilayaasha ganacsiga yar yar ka faa'iidaysan karaan by kasbashada xirfadlayaasha technology, kuwaas oo si ay u caawiyaan awood iyo kalsooni ganacsigaaga.
Qalabka hoos ku dhuuban Way fududahay in la helo in wax su'aal search engine.
Maareeyayaasha password: LastPass waa qalab maamulka password aad u fiican si aad u maareyso oo dhan passwords ganacsi si ammaan ah. daalacashada web badan oo kale oo la socda kitfo password sidoo mararka qaarkood laga heli karaa sida plugins.
anti Agab: Marka Adda kuma filna, mararka qaarkood weerarka ka heli kartaa agagaarka antivirus dhaqanka iyo qalab gaar ah si loo hubiyo in aad PC ganacsiga mid aan jeermis lahayn wax burbur waa wax fiican. Malwarebytes waa xal weyn.
Network Protection isticmaalaya DNS: Ever la yaabanahay waxa dhacaya marka aad ku qor in website a galay browser iyo sida aad u heli goobta? malaha ma, laakiin waxaa jira wax badan oo socda ee TT in aad qaadato in website-ka aad doorato. Mid ka mid ah qayb muhiim ah oo ku saabsan sida isgaarsiinta internet ka shaqeeya waa wax loo yaqaan DNS ama Domain Name Service. Maxaa dhacaya haddii aad ganacsiga yaryar lahaa xoogga shirkad weyn technology badan oo ilaha ammaanka si loo hubiyo in website-ka aad socdeen ma ahaa xaasidnimo ah - fiiri OpenDNS ka Cisco, isticmaal xor ah.
Well, in wuxuuuna ilaa muddo bil wacyi Security internetka; Waxaan rajaynayaa in this taxane ahaa ee lacagta aad milkiilaha ganacsiga yaryar si ay u caawiyaan jidka dhibaato ee aad ganacsi ee adduunka our internetka.
Qoraagu wuxuu la gaari karaa https://www.linkedin.com/public-profile/settings?trk=d_flagship3_profile_self_view_public_profile
SBDC Mankato jeclaan lahaa in la kordhiyo qadarin si William Tucek, waayo, shuqulladiisa asalka ah oo noo ogolaaday in ay leeyihiin xuquuqda daabacaadda gaar ah iyaga, waayo,. Waxaan rajaynaynaa in taxanahan ayaa aad caawisay in hab qaar ka mid ah la ganacsiga yaryar iyo waxaan kugu dhiirinaynaa in aad nala soo xiriir si kasta baahida tashan waayo, ganacsiga yaryar ama xawaaladaha.
Entry waxa loo posted on Wednesday, October 25-, 2017 at 6:14 pm	and is filed under Blog. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.